DECRYPT EFS ENCRYPTED FILES SY FOLDERS AO AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Decrypt EFS Encrypted Files sy Folders ao amin'ny Windows 10
Encrypting File System (EFS) dia teknolojia enti-miasa ao Windows 10 izay ahafahanao manaova angon-drakitra mora tohina toy ny rakitra sy lahatahiry ao amin'ny Windows 10. Ny Encrypting of files na folder dia atao mba hialana amin'ny fampiasana tsy nahazoana alalana. Vantany vao manafina rakitra na lahatahiry ianao dia tsy misy mpampiasa hafa afaka manova na manokatra ireo rakitra na lahatahiry ireo. EFS no encryption matanjaka indrindra ao amin'ny Windows 10 izay manampy anao hitazona ireo rakitra sy lahatahiry manan-danja.
Raha mila manafoana ireo rakitra sy lahatahiry ireo ianao mba hahafahan'ny mpampiasa rehetra miditra amin'ireo rakitra na lahatahiry ireo dia mila manaraka an'ity dingana ity ianao. Ka raha tsy mandany fotoana isika dia ndao jerena Ahoana ny famoahana ny rakitra sy ny folder Ery Encrypted ao amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny fanampian'ny tutorial eto ambany.
Ahoana ny fomba fampidirana rakitra sy folder misy Encrypted amin'ny EFS ao amin'ny Windows 10
Fomba 1: Esory ny rakitra na ny fampirimana amin'ny fampiasana ireo toetra mandroso
Fomba 2: Esory ny rakitra na ny fampirimana amin'ny alàlan'ny Command Prompt
Hamarino tsara fa mamorona teboka famerenana sanatria misy zavatra tsy mety.
mamerina sy manoratra indray ireo singa fanavaozana ny windows
1. Kitiho havanana amin'ny misy rakitra na fampirimana izay tianao atao encrypt dia safidio Fananana.
tsy mandeha ny mikrô iPhone pro 4
2. Hamarino tsara fa hifamadika amin'ny Takelaka ankapobeny avy eo tsindrio ny Bokotra mandroso eo ambany.
3. Ankehitriny ambanin'ny toetra Compress na Encrypt faritra marika Encrypt ny atiny hahazoana antoka ny angona ary tsindrio OK.
4. Tsindrio indray OK ary ny Hamafiso ny fanovana ny toetra hiseho ny varavarankely.
5. Safidio na Ampiharo ny fanovana amin'ity fampirimana ity na Ampiharo ny fanovana an'ity fampirimana, subfolders ary fisie ity ary avy eo tsindrio OK.
6. Hahomby izany esory ny rakitrao na ny lahatahiry ary ho hitanao eo ambonin'ireo rakitrao na lahatahiry ny sary mihetsika zana-zana-tsipìka.
1. Tsindrio havanana amin'ny misy fisie na fampirimana izay tianao decrypt dia safidio Fananana.
Tsy afaka mampiseho ny pejy web ny mpikaroka Internet
3. Ankehitriny eo ambanin'ny fizarana toetra Compress na Encrypt esory Encrypt ny atiny hahazoana antoka ny angona ary tsindrio OK.
4. Kitiho ok indray ary ny Hamafiso ny fanovana ny toetra hiseho ny varavarankely.
5. Safidio na Ampiharo fotsiny ity fanovana ity na Ampiharo ny fanovana an'ity fampirimana, subfolders ary fisie ity amin'izay tianao, ary avy eo tsindrio OK.
ovay ny teny fohazina google an-trano
1. Open Command Prompt. Afaka manao an'io dingana io ny mpampiasa amin'ny fikarohana azy 'Cmd' ary avy eo tsindrio Enter.
2. Soraty amin'ny cmd ity baiko manaraka ity ary tsindrio Enter:
To Decrypt a File: cipher /d 'full path of file with extension'
Fanamarihana: Soloy ny lalan'ny fisie feno amin'ny fanitarana miaraka amin'ny toerana tena misy an'ilay fisie miaraka amin'ny fanitarana azy ohatra:
cipher / d C: Users Adity Desktop File.txt
windows manavao ny fampiasana kapila avo lenta
Mba hamoahana rakitra:
cipher /d 'full path of folder' (Apply changes to this folder only) cipher /d /s:'full path of folder' (Apply changes to this folder, subfolders and files)
Fanamarihana: Soloy ny toerana misy ny fampirimana amin'ny toerana tena misy ilay fampirimana, ohatra:
cipher / d C: Users Adity Desktop Folder Vaovao
3. Vita ny cmd akaiky ary avereno indray ny PC.
Avelao na sakano ny mpampiasa hanova ny daty sy ny ora ao amin'ny Windows 10
Fomba 3 hanovana ny hatevin'ny kursor ao amin'ny Windows 10
Izay no nianaranao tsara Ahoana ny famoahana ireo rakitra sy folder ao amin'ny EFS ao anaty Windows 10 fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampianarana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Windows 10 (19H1) topi-maso Build 18234 Navoaka, Ity misy vaovao!
Windows 10 Build 18234 (19H1) navoaka ho an'ny peratra fitsangantsanganana mialoha izay mampiditra ny fanohanan'ny ink Microsoft To-Do, ny Sticky Notes 3.0, ny fanatsarana ny Snip & Sketch ary ny fanamboarana bibikely
Fampivoarana ny endri-javatra ho an'ny Windows 10 kinova 20H2 tsy nahavita nametraka 0xc1900101 (Vahaolana)
Windows 10 Oktobra 2020 fanavaozana ny kinova 20H2 natsahatra ny fisintomana, sa tsy nahavita nanao fahadisoana samihafa? Alefaso ny troubleshooter fanavaozana Windows ofisialy, Avereno ireo singa fanavaozana Windows.
Voavaha: Windows 10 100% Fampiasana kapila aorian'ny Oktobra 2020 Vaovao farany
Giveaway -WinX DVD Ripper, Edit ary Rip DVD Haingana kokoa amin'ny Windows 10
Manampia Interface User Graphical (GUI) Ao amin'ny Microsoft Robocopy
Inona ny menu an'ny mpampiasa Windows 10 Power (Win + X)?
Inona no dikan'ny Lock Symbol amin'ireo Snapchat Stories?
Atambaro ao anaty boaty Gmail Inbox ny kaonty mailaka rehetra
Amboary ny Windows 10 Calculator tsy hita na nanjavona
Amboary ny lozam-pifamoivoizana Regedit.exe rehefa mikaroka amin'ny Registry
Esory ny doka sy doka pop-up amin'ny Internet Browser
Tsy hisokatra ny fifanolanana? Fomba 7 hamahana ny tsy fifanarahana dia tsy hisokatra olany
windows 10 manavao ny tehina amin'ny 99
error error start menu Windows 10 fix
mikrô tsy mandeha aorian'ny fanavaozana ny windows
Windows 10 iTunes tsy mahalala iPhone
fa maninona no tsy tapaka ny fidiran'ny WiFi amiko amin'ny Windows 10
Windows 10 vaovao farany 1903 tsy nahomby
© 2022 jf-oeiras.pt | Politika Fiarovana Fiainan'Olona